Zingi pena / zingi Cut Wire pena - China Shanghai Bosun hasha
DZICHIBUDA zingi pena inoitwa nedanho kudhirowa, kucheka kutonhodza nezvimwewo .. Zvino inoshandiswa deburing uye kuchenesa pamusoro siyana Aluminum chiwanikwa, zingi kufa castings. Nekuti avo chaiyo giravhiti riri pedyo simbi uye pokuoma yakaderera, kuti deburing kunogona kuitwa pasina akapfeka zvigadzirwa 'hukawanika. Zvikasadaro anosiyaniswa kubva Aluminum hasha, kuti kuchengeteka zvakanaka kuti zvikuru nechepazasi kinding pfungwa muguruva. Uye vari zvakare yoku pa pachena zviitwe pamusoro ...
Zingi pena inoitwa nedanho kudhirowa, kucheka kutonhodza nezvimwewo .. Zvino inoshandiswa deburing uye kuchenesa pamusoro siyana Aluminum chiwanikwa, zingi kufa castings. Nekuti avo chaiyo giravhiti riri pedyo simbi uye pokuoma yakaderera, kuti deburing kunogona kuitwa pasina akapfeka zvigadzirwa 'hukawanika. Zvikasadaro anosiyaniswa kubva Aluminum hasha, kuti kuchengeteka zvakanaka kuti zvikuru nechepazasi kinding pfungwa muguruva. Uye vari zvakare yoku pa pachena zviitwe pamusoro hukawanika basa zvidimbu.
Zingi akacheka waya pena hasha inopa sangano yakaderera chaizvo Rockwell B pokuoma (20 - 30) rakakodzera kushandiswa mune deburring kufa castings.
Zingi pena anokwanisa kubvisa nokupenya kusvikira .020 "kubva pazvipfuwo castings.
Zingi akapfura zvakare kunosiya deposition kuti zingi pabasa chinhu rinopa ngura nemishonga.
Zingi pena unoshandiswawo kuzopfekenura pendi uye upfu coatings. The softness of zingi pena unoshanda chaizvo panguva achibvisa coatings pasina kukuvadza tooling.
kambani yedu hatigoni kubuda rakarukwa bhegi kavha, ton bhegi kavha, huni tireyi kavha, epurasitiki chiputiriso kavha uye zvakafanana maererano mutengi zvinodiwa
Zingi Cut bara
Previous: Steel pena-S170
Next: Aluminum pena / Aluminum Cut Wire bara
pakuonekwa zingi bara
Pure zingi Wire
zingi Cut Wire ndokupfura
zingi bara Blast
zingi akapfura nenyunje